Izindaba - LANDELA INDLELA ELUHLAZA
Imboni yemikhiqizo yendwangu efanelekile iqinisekisa ukuphepha nemvelo ehlanzekile, ngaleyo ndlela iqinisekise imodeli yebhizinisi yesikhathi eside yazo zonke izinkampani ezithintekayo. Ubuchwepheshe bamuva kanye nemikhuba emihle esetshenzisiwe iholela kunzuzo yokuncintisana ngenkathi kuncishiswa ngasikhathi sinye imvelo nabantu. Lokhu sikuqonda ngaphansi kwendlela eluhlaza okwesibhakabhaka. Ngokubambisana siguqula umthelela wezindwangu ube ngcono.
ISINYATHELO NGESINYATHELO SOKUQHUBEKA NOKUQINISEKA
Ukuphatha izinto zamakhemikhali kusukela ekuqaleni kwenqubo yokukhiqizwa kwemikhiqizo yendwangu kuya phambili - umbono lapho iBLUESIGN izibophezele khona. Input Stream Management yindlela okufinyelelwa ngayo lokhu. Kungakho abalingani embonini yamakhemikhali benziwa ukuhlolwa okuqinile esizeni ukuze kuhlolwe ukusebenza koHlelo Lokuphathwa Komkhiqizo olusetshenzisiwe. Lokhu kuvumela ukubukwa okusobala kwemikhiqizo yamakhemikhali eyenziwe kanye nezingozi zayo. Idatha enembile nokwakhiwa kwamakhemikhali amasha anobungozi obuphansi kuyisihluthulelo sokuphathwa kobungozi nokusuka esimeme ezintweni ezinobungozi zamakhemikhali. I-Real Chemical Change Management yenza kube lula ukukhipha ubuthi kuwo wonke ama-supply chain, wona wona ahlinzeka ngomsebenzi ophephile futhi osimeme nezimo zokuphila.
Izinto zendwangu nezesekeli zenziwe kuphela ngamakhemikhali ahloliwe endaweni yokukhiqiza ephephile futhi ehlanzekile ngaphandle kokuyekethisa ikhwalithi, ukusebenza noma ukwakheka - IBLUESIGN ikuqinisekisa lokhu ngokuhlolwa kwenkampani esizeni kanye nokuqaliswa kohlelo oluphelele lokulawulwa kobungozi kuzo zonke izinhlobo zabakhiqizi. Ngaphezu kokuphathwa kwamakhemikhali asezingeni nekhwalithi, umqondo ukhuthaza ukucutshungulwa kokuthuthukiswa kwezinsizakusebenza ukuze kuncishiswe imithelela kubantu nakwezemvelo ngokuphelele. Ukunamathela ezingeni lomphakathi kuyisidingo esiyisisekelo kithi. Abasebenzi abanelisekile kuhlu lwabaphakeli nabathengi abaqinisekisiwe ngumphumela.
Ukulandeleka kwemikhiqizo yendwangu kudinga imininingwane eqinisekisiwe nolwazi olufanelekile. Ngaphezu kwalokho, ukulandelela kudinga ukushesha futhi kungabi lula ukwenza izinqumo zebhizinisi ezinesibopho. Isixazululo se-Cloud Computing sinikela ngokulandela umkhondo okuqhubekayo kwemikhiqizo, isexwayiso sengozi eku-inthanethi uma kukhona izinguquko, kanye nezincomo zokuncishiswa okungeziwe kobungozi. Uxhumano lomhlinzeki wenethiwekhi luxhuma abalingani abafanele ndawonye. Ngakho-ke, imikhiqizo yenziwa ngokusebenza kahle okuphezulu kanye nenzuzo enkulu kumthengi nakwimvelo. Lokhu ukulandelwa okuqondile.
Umhlaba uyayigqoka: Imikhiqizo yendwangu elandela indlela eluhlaza okwesibhakabhaka futhi enokulandeleka okucacile nokuqhubekayo. Ikhwalithi yomkhiqizo ngaleyo ndlela imele umthwalo omncane wezemvelo ngokusimama okukhulu. Ukuxhumana okuvulekile ngemininingwane eqinisekiswe ngumuntu wesithathu futhi esekwe eqinisweni ixoxa indaba yomkhiqizo omusha eqinisekisa isithombe esithembekile, esimeme ngenkathi kwakhiwa ukwethembana. Sikhombisa umzamo omkhulu wemboni futhi siqondise umthengi ngendlela eluhlaza okwesibhakabhaka.